Scurek Rebula 2016
Urek Rebula 2016
Rebula Up waa hodan, oo leh udgoon leh oranji, khudrad, iyo miro la qalajiyey. Dhanka daarta, waxay si macaan ugu dufanaysaa qaar ka mid ah dhadhanka vanilj.
Khamri oranji waa dunida adduunka hadda. Waa buzzword ugu dambeysay ee dadka caba khamriga. Astaamaha gaarka ah ee Slovenia oo leh koobabka oranji waa in taariikh ay jirto, ma ahan oo keliya faallo cusub, Gobollada kale ee adduunka, dadku waxay isku dayayaan inay ka sameystaan ​​maqaar taabasho maqaar. Rebula Up waa tusaale fiican oo khamri wanaagsan oo macaan - ma ahan mid jilicsan laakiin waa mid cusub oo jilicsan, marka waxaan u maleynayaa inaan sameynay xulasho sax ah. ”
Khudaarta oranji waxay ka helaan udgoonkooda gaarka ah iyo dhadhanka hodanka ah xiriirkooda dheer ee maqaarka canabka cad.
In kabadan 120 sano kahor reer Ščurek qoysku waxay beero 1 hektar oo canab ah, iyagoo ka dhigaya 50 hektar khamri. Khamriga waxaa markii uguhoreysay la dhajiyay 1990 markii reer Ščurek ay beeroodeen 7 hektar oo canab ah waxayna soo saareen 15.000 dhalo oo khamri ah sanadkii. Maanta aabihii Stojan Ščurek (sawirka) iyo shantiisii ​​wiil ayaa leh waxayna leeyihiin wax ka badan 20 hektar oo canab ah, oo qaarkood ka weynaadeen 55 sano.
Sannad walba reer Ščurek waxay sii daayaan ilaa 90,000 dhalo oo khamri tayo sare leh oo laga sameeyay noocyada canab kala duwan ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Waxay ku sii nagaadeen daacadnimooyin cusub laakiin buuxa oo dib-u-dhac ah oo waxay dib u dhigaan bilawga koowaad illaa guga dambe.
Maanta "Secure" waxay soo saartaa qiyaastii 120,000 oo dhalo oo khamri ah oo leh goosgoos kasta. Laakiin intii lagu jiray xilligii Tito iyo nidaamkii shuuciyadda ee Yugoslavia, iyo sababta oo ah qoyska reer Scurek kama mid ahayn xisbiga shuuciga, dowladda ayaa ka mamnuucday iyaga iyo kuwa kale inay qarxiyaan khamrigooda. Dawladdu waxay ka rabtay inay siiso boqolkiiba soddon sanadgoodkoodii canab ee sanadlaha ah gobolka iyada oo loo sii marayo iskaashiga maxalliga ah - tii aan ku soo maray jidkayga halkan, oo wali shaqeynaya laakiin hadda si gaar ah loo leeyahay.